Margarekha किन यौन-सपना देखिन्छ ? – Margarekha
किन यौन-सपना देखिन्छ ?
यौनको दृष्टिकोणले स्वस्थ व्यक्तिमा यो हर्मोन हुन्छ नै तर पनि कुनै व्यक्तिले यौन–सपना नै नदेख्न पनि सक्छ । यौन–सपना देखेर निद्रामै यौन चरमसुख पाउनु अनि यौन–सपना नै नदेख्नु दुवै प्राकृतिक कुरा हो । नेपाली हेल्थबाट
१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०७:२३ प्रकाशित